အဘယ့်ကြောင့်နိူးထမှုမရှိသနည်း။ စစ်မှန်သောအဖြေ | Why No Revival? The True Answer! | Real Conversion
WHY NO REVIVAL? THE TRUE ANSWER!
(SERMON NUMBER 10 ON REVIVAL)
အောက်တိုဘာလ ( ၅ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Lord’s Day Evening, October 5, 2014
“သူတို့နှင့်ကွာစေတော်မူပြီ။ ( ဟောရှေ ၅း ၆ ) “သူတို့သည် ကိုယ်အပြစ်ကိုဝန်မချ၊ ငါ့မျက်နှာကိုမရှာမှီတိုင်အောင်၊ ငါသည် ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား၍ နေရမည်။” ( ယောရှေ ၅း ၁၅ )
ဟောရှေအခန်းကြီး ၅ ၏အဓိကအကြောင်းအရာမှာ အခန်းကြီး၏အစပိုင်းတွင် Scofield သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်နှင့်ကွာတော်မူ ခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများထံမှ မျက်နှာကိုလွှဲတော်မူသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့၏မာန်မာနနှင့်အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် အမေရိကန်တို့နှင့် ပဋိညာဉ်မပြုဟု ကျွန်ုပ်သိထားသည်။ သူသည် ဣသရေလလူမျိုးများနှင့် လောကနှင့်ဆိုင်သောပဋိညာဉ်ကိုပြုခဲ့ကြသည်။ အခြားလူမျိုးများနှင့် ပြုထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုထားသောကျမ်းပိုဒ်တွင် ဘုရားသခင်သည် သူပဋိညာဉ်ပြု ထားသောလူမျိုးများအပေါ် သူတို့၏မာန်မာနနှင့်အပြစ်ကြောင့် မျက်နှာလွှဲတော်မူကြောင်းကို မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် ၎င်း၏ပဋိညာဉ်ပြုထားသောလူများကိုပင်စွန့်ပစ်ထားလျှင် အမေရိ ကန်လူမျိုးများမှစ၍ အနောက်တိုင်းကမ္ဘာရှိလူများကို အဘယ်ဆိုဖွယ်ရှိမည်နည်း။ Dr. J. Vernon McGee က ဤသို့ဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရဆိုရလျှင် အမေရိကန်လူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်၏ပြစ် ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရသည်ဟုဆိုချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဣသရေလလူ လူမျိုးများကဲ့သို့ပင် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်း၏အကျိုးဆက်ကိုခံစားနေ ကြရပေသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, အတွဲ ၃၊ Thomas Nelson Publishers, ၁၉၈၂၊ စာ- ၆၃၃၊ ဟောရှေ ၅း ၂ နှင့်ပါတ်သက်၍မှတ်စုငယ်)
“သူတို့သည် ကိုယ်အပြစ်ကိုဝန်မချ၊ ငါ့မျက်နှာကိုမရှာမှီတိုင်အောင်၊ ငါသည် ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား၍ နေရမည်။” ( ယောရှေ ၅း ၁၅ )
ဘုရားသခင်က မျက်နှာတော်ကိုလွှဲတော်မူခြင်းအားဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးမည့် အပြစ်ရှိ သောလူမျိုးများအကြောင်းကို ဤနေရာတွင်မိန့်မူထားသည်။ “ ငါသည် ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား ၍နေရမည်….” ဟုဆိုထားသည်။ သန့်ရှင်းသူများကိုထောက်ခံသူ Jeremiah Burroughs က ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုထားသောကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်၍ သူ၏အမြင်ကို ဤသို့မှတ်ချက်ပြုထား သည်။
“ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား၍ဟူသည်မှာကောင်းကင်ဘုံသို့တဖန်ပြန်သွား မည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူတို့ကိုထိခိုက်နာကျင်စေသောအခါ သူတို့နှင့်လုံးဝမ သက်ဆိုင်သကဲ့သို့ ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်၍ ထိုင်နေတော်မူမည်။” (Jeremiah Burroughs, An Exposition of the Prophecy of Hosea, Reformation Heritage Books, ၂၀၀၆၊ စာ- ၃၀၅၊ ဟောရှေ ၅း ၁၅ နှင့် ပါတ်သက်၍ မှတ်စုငယ်)
ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့အနောက်တိုင်းနိူင်ငံများတွင် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် စစ်မှန်သော နိူးထမှုမတွေ့မြင်ရခြင်း၏အကြောင်းတရားဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံမျက်နှာတော်ကိုလွှဲတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်က “သူတို့သည် ကိုယ်အပြစ်ကိုဝန် မချ၊ ငါ့မျက်နှာကိုမရှာမှီတိုင်အောင်၊ ငါသည် ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား၍ နေရမည်…” ဟုဆိုထား သည်။ သင်သည် ထိုအရာကို သဘောမတူဘဲ ငါသည် သာသနာပြုဖြစ်သည့်အတွက် သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မထိုက်တန်ပါဟုဆိုနိူင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် နာမည်ကြီးတ ရားဟောဆရာကြီး Dr. Martyn Lloyd-Jones ကိုကြားဖူးပါသလား။ အောက်ပါအကြောင်းအ ရာသည် သူ၏ပြောဆိုချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ခရစ်အသင်းတော်သည် သဲကန္တာရတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေကြောင်း ကို ဘုရားသခင်သိတော်မူသည်။ သင်သည် ၁၈၃၀ သို့မဟုတ် ၁၈၄၀ ဝန်းကျင်မတိုင်မှီအသင်းတော်သမိုင်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာလျှင် နိူင်ငံပေါင်းများ စွာတွင်နိူးထမှုဖြစ်လာရန် ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာမြင့်သည်ကို တွေ့ရှိ ရပေမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ၁၈၅၉ခုနှစ်၌ အဓိကနိူးထမှုကြီးတစ်ခုသာရှိ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြုံသောအချိန်ကာလမနည်းတော့ပြီ။ ဘုရားသခင်သ ခင်သည် ဤဘုရားသခင်အားသက်ဝင်ယုံကြည်မှု၊ ရန်ငြိမ်းခြင်းနှင့် အပြစ် ဖြေခြင်းအကြောင်းယုံကြည်ခြင်းများကို ဆုံးရှုံကြပြီး ဥာဏ်ပညာ၊ အတွေးအ ခေါ်နှင့် သင်ယူမှုဘက်သို့လမ်းလွှဲသွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်း တော်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အသီးမသီးသောအချိန်ကာလကို ဖြတ်ကျော် ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သဲကန္တာရထဲတွင်ရှိလျက်နေကြသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအခြေအနေကို ကျော်လွန်လာခဲပြီဟုအကြံပေးပြောဆို သောသူများရှိလျှင် အယုံအကြည်မရှိပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နိူးထမှုမရှိနိူင်ပါ။ (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, 1987, Crossway Books, စာ- ၁၂၉ )
၂ဝရာစုတွင် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော သာသနာပြုများတွင်မဟုတ်၊ နာမည်ကြီးတရားဟော ဆရာနှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက်တွင် တစ်ယောက်အားဖြင့်နိူးထမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်ကို ကွာစေတော်မူသည်ဖြစ်၍ “ ၁၈၃၀ သို့မဟုတ် ၁၈၄၀နှစ်များမတိုင်မှီတွင် ဆယ်နှစ်တွင်တစ်ကြိမ် နိူးထမှုပုံမှန်ဖြစ်ပွါးသော်လည်း၁၉၅၉ခုနှစ်မှစ ၍ အဓိကနိူးထမှုတစ်ခုသာရှိပါသည်။” ( ထပ်၍ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိူးထမှုတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုအမှန်တကယ်ရှိခဲ့ပါလျှင် နောက်သို့ပြန် လှည့်ပြီး ၁၈၃၀ သို့မဟုတ် ၁၈၄၀ကြားတွင်ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အရာများကို ဂရုတစိုက်လေ့လာဆင် ခြင်ရပါမည်။ ထိုနှစ်ကာလများမတိုင်မှီတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် ဆယ်နှစ်တွင်တစ်ကြိမ် ခန့်စီ နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်ကာလများတွင် ၁၈၅၉ခုနှစ်ကတည်းက အဓိကနိူးထမှုတစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပွါးခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၁၈၃၀ နှင့် ၁၈၄ဝခုနှစ်များကြားတွင် ဘုရားသခင်အား “မိမိကိုယ်ကိုကွာစေတော်မူပြီ”( ဟောရှေ ၅း ၆)၊ ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား၍ နေရစေမည့်” ( ယောရှေ ၅း ၁၅ ) အကြောင်းတရားများရှိ ရပေမည်။
သင်သည် ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်၏သမိုင်းကြောင်းကို အမှန်တကယ်သိရှိနားလည်လျှင် အဘယ်အရာများဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာ ရှင်းလင်းသွားပေမည်။ Charles G. Finney မည်သို့ဖြစ် သနည်း။ သမိုင်းဆရာကြီး Dr. William G. McLoughlin, Jr. က ဤသို့ရေးသားခဲ့ပါသည်။
သူသည် အမေရိကန်နိူးထမှုဝါဒတွင် ခေတ်သစ်တစ်ခုကို ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို ခဲ့သည်။ သူသည် ဒဿနပညာတစ်ခုလုံးနှင့် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်ဖြစ်စဉ်များကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ (William G. McLoughlin, Jr., Ph.D., Modern Revivalism; Charles G. Finney to Billy Graham, The Ronald Press, ၁၉၅၉၊ စာ- ၁၁ )
Finney မတိုင်မှီတွင် တရားဟောဆရာများက နိူးထမှုသည် ဘုရားသခင်ထမှလာပြီး တစ်ဦးစီတိုင်းပြောဆိုသောစကားသည် ဘုရားသခင်ထံမှလာသောအံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ် ကြောင်းကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ၁၇၃၅ခုနှစ်တွင် Jonathan Edwards က နိူးထမှုကို “ဘုရားသခင်၏အံ့ဩဘွယ်ရာလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်” ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ ၁၈၃၅ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွင် Finney က နိူးထမှုဟူသည်မှာ “အံ့ဩဘွယ်ရာနိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားသောနည်းလမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုထားခြင်း၏ ဒဿနဆိုင်ရာ အကျိုးရလဒ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။” ဆိုလိုသည်မှာ “နိူးထမှုသည် အံ့ဘွယ်နိမိတ်လ က္ခဏာမဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများကို ကောင်းစွာအသုံးပြုခြင်း၏ သဘာဝအကျိုး ဆက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။” ၄င်းမှာ ခေတ်သစ်အင်္ဂလိပ်တွင် သူပြောဆိုခဲ့သောအရာဖြစ်သည်။
Jonathan Edwards နှင့် Finney တို့၏ခြားနားချက်မှာ Edwards သည် ပရိုတဲ့တင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Finney သည် လူသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်တစ်ခု တည်းကိုသာအမှီပြုခြင်းထက် မိမိကိုယ်တိုင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့်သာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ထားသည့် ပဲကျင်းနိ(စ်)တစ်ယောက်၊ မှားယွင်သောဩဝါဒရှိသူဖြစ်ပါသည်။ Finney သည် မက်ဒသစ်ကဲ့သို့ အာမီးနီးယမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းမှာ မှားယွင်းသောအရာ ဖြစ်ပေသည်။ Finney ၏ယုံကြည်ချက်များမှာ ကနဦးမက်ဒသစ်အသင်းတော်ယုံကြည်သည့် အာမီးနီးယမ်းဝါဒနှင့်များစွာခြားနားပါသည်။ Finney ၏ထင်ရှားသောတရားဟောချက်တစ်ခုကို “ အပြစ်သားများသည် ၎င်းတို့၏နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေရန် ချုပ်နှောင်ထားသည်” (၁၈၃၁) ဟုခေါင်း စဉ်တပ်ဖူးသည်။ ဘုရားသခင္ ကိုတွန်းထုတ်ထားပြီး လူသည္ မိမိကြိုးစားမှုအားဖြင့် မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ ကယ်တင်ခြင်းကိုဆောင်ယူလာနိူင်သည်။ မက်ဒသစ်အသင်းတော် သည် Finney မတိုင်မှီတွင် ထိုကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါ။ Iain H. Murray က Finney ၏အ တွေးအခေါ်အယူအဆများသည် ကနဦးမက်ဒသစ်ခံယူချက်မဟုတ်ဘဲ၊ Nathaniel Taylor ကဲ့ သို့သော နယူးအင်္ဂလန်လီဗရယ်ခံယူချက်မှလာသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ (Iain H. Murray, Revival and Revivalism, Barnner of Truth, ၂၀၀၉၊ စာ ၂၅၉-၂၆၁ ) မက်ဒသစ် ခံယူချက်က “ အပြစ်သားများသည် ၎င်းတို့၏နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေရန် ချုပ်နှောင်ထား သည်” ဟုလုံးဝဆိုမထားပါ။ George Smith က သူရေးသားသည့် ဝယ်စလီမက်ဒသစ်သမိုင်း စာအုပ်တွင် နိူးထမှု၏အဓိပ္ပါယ်ကို အောက်ပါအတိုင်းဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
နိူးထမှုဟူသည်မှာ ၎င်း၏သဘောသဘာဝတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၏သာမန်ခွဲစိတ်မှုမှကွဲခြားပြီး လူ၏အလင်းရစေခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းတွင် ၎င်း၏သာ၍ကျယ်ပြန့်ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ကြီးမားသော ပြင်းပြမှုကြောင့် လူစိတ်ဝိ ညာဉ်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သက်ရောက်စေခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ (George Smith, နိူးထမှု၊ အတွဲ-၂၊ ၁၈၅၈၊ စာ-၆၁၇ )
ဤသည်မှာ ကနဦး မက်ဒသစ်အသင်းတော်၏ နိူးထမှုနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါသည်။ Finney ၏ မှားယွင်းသောအယူဝါဒထင်ပေါ် ကျော်ကြားလာ ပြီး ဘုရားသခင်ကို ရုပ်ဖျက်ခြင်းမတိုင်မှီတွင် ပရိုတဲ့တင်းအသင်းတော်တစ်ခုခု နှင့် နှစ်ခြင်းအ သင်းတော်ကလည်း ထိုကဲ့သို့ပင် ပေးထားနိူင်ပါသည်။ Finney အယူဝါဒနောက်ပိုင်းတွင် သူတို့သည် “နင်းချေခံရပြီး စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်ရဲချို့တဲ့ပြီး မျက်စိကန်းကာ အဝတ်အချည်းစည်းရှိကြောင်း”ကို သူတို့မသိနိူင်ကြပါ။ (ဗျာ ၃း ၁၇ ) Finney နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် “မိမိကိုယ်ကို ကွာစေတော်မူပြီး ကိုယ်နေရာသို့ပြန်၍နေသည်ကို” လည်း အဘယ်သူမျှမသိရှိကြပါ။
George Smith ၏ရေးသားချက်ကို ကောက်နှုတ်ထားခြင်းက ကနဦး မက်ဒသစ်အ သင်းတော်သည် ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့် နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်တွင် အပြည့်အဝတည်နေသည်ဟု ယုံကြည်ကြကြောင်း ပြသထားပါသည်။ ၎င်းသည် Finney က ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကို ဖျက်ဆီး တော်မမူမှီတွင် ပရိုတဲ့တင်းအားလုံးနှင့် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တို့၏ယုံကြည်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်ကြီးများ၏ရှုထောင့်ဟောင်းမှာ Finney က ၎င်း၏ထင်ရှားသော တရားဒေသနာ ဖြစ်သည့် “ အပြစ်သားများသည် ၎င်းတို့၏နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေရန် ချုပ်နှောင်ထားသည်” ဟူသောခေါင်းစဉ်တွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့် ပဲလိဂျီရ(စ်) အမြင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည် ခုနှစ်လုံးလုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ အတွေ့အကြုံအားဖြင့် မဖြစ်နိူင်ကြောင်းကို သိလာရပါသည်။
Finney မှာ အပြစ်သားများအား သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းကိုရရှိနိူင်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးသောသူဖြစ်ပါသည်။ သူသည် Dr. McLoughlin ပြောဆိုခဲ့သကဲ့သို့ “ဒဿနပညာတစ်ခုလုံးနှင့် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်ဖြစ်စဉ်များကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။” (ထပ်၍ ) ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဧဝံဂေလိအယူဝါဒရှိသူများက “အပြစ်သားများ၏ဆုတောင်းချက်”ဟုဆိုကြကာ အပြစ်သားများသည် မိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်မှုဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းသွန်သင်ထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီ” သမားများသည် Charles G. Finney တည်ထောင်ထားသည် မှားယွင်း သော ပဲဂျီရ(စ်)သွန်သင်ခြင်း၏တိုက်ရိုက်မွေးဖွါးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီ သည် လျှင်မြန်စွာပင်ပျံ့နှံ့ထင်ရှားလာသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် “အလွန်လျှင်မြန်လွယ်ကူလှပေသည်။” သင်သည် အပြစ်သားများအားအပြစ်ကိုသိရှိ နားလည်စေပြီး ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို စောင့်ဆိုင်းရန်မလို အပ်တော့ပါ။ Finney သည် ဧဝံဂေလိဝါဒကို လူအများတည်ဆောက်သည့် “ခရစ်ယာန်”သစ် တစ်ခုဆီသို့ပြောင်းလဲစေပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် ခရစ်ယာန်လုံးဝမဟုတ်ပေ။ ထိုအရာမှာ ပရိုတဲ့တင်းများနှင့် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များကို အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးသည့် အရာဖြစ်သည်။ “ရီဗရယ်ဝါဒ” ရှိသူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းမရဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချနိူင်ပါ သည်။ ဤသည်မှာ ပရိုတဲ့တင်းရီဗရယ်ဝါဒ ဆင်းသက်ရာနေရာဖြစ်ပါသည်။
Iain H. Murray က ပြောင်းလဲခြင်းသည် လူ၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်ဟူသောအယူ အဆသည် ပြောင်းလခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်ဟူသောအရာကိုလူတို့ မေ့လျောနေသကဲ့သို့ ဧဝံဂေလိအယူဝါဒ၏အစိတ်အပိုင်းတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသောအရာပင်ဖြစ်ပါ သည်။ထို့ကြောင့် နိူးထမှုတွင်လည်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပျောက်ကွယ်သွားပေသည်။ [ထိုအရာများမှာ] Finney ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပင်ဖြစ်ပါ သည်။ (Revival and Revivalism, Banner of Truth, ၁၉၉၄၊ စာ ၄၁၂-၁၂ )
“လျှင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသောအရ0ာ”ကု ဘုရားသခင်က အဘယ့်ကြောင့် အသုံးမပြုပါသ နည်း။ ထိုသို့အစား ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုတဲ့တင်းနှင့် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များကို ပျောက်ဆုံးသူများ နှင့်ပြည့်၀စေပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များတွင် ပျောက်ဆုံးသော သူများများစွာရှိသည်ဖြစ်၍ တရားဟောဆရာများစွာက သူတို့၏ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းအစီအ စဉ်များကို ပိတ်ရမည့်အထိခံစားနေကြရသည်။
pကျွန်ုပ်က သင်းအုပ်တစ်ယောက်၏မိန်းမကို အဘယ့်ကြောင့် ဘုရားကျောင်းပိတ်ရ သည်အကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူမက “သူတို့မလာနိူင်ကြမည်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ သည်” ဟုဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ မပြောင်းလဲသူများကို အသင်းတော်ဝင် ဖြစ်စေခြင်း၏အကျိုးရလဒ်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် လူ့ “ဆုံးဖြတ်ချက်” ကိုချခဲ့ကြသည်။” ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်လွှတ်တော်မူပါစေသော်။ အဟောင်များ ဖြစ်သည့် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာသမ္မာကျမ်းစာပုံစံများမပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေတိမ်နစ်ခဲ့ကြ သည်။ မိမိကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိူင်ပါ။ ဘုရားသခင်သာလျှင် နိူးထမှုကိုစေလွှတ်ပေးပိုင်ရှင်ဖြစ် ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီများသည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြပြီး လူသားအား နန်းပလ္လင် တင်ကြပေသည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကား ဤသို့ဖြစ်သည်။
၎င်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ယူနိူက်တက်ကိမ်းတမ်းတွင် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ ကျော် အဓိကနိူးထမှုမရှိနိူင်သည့် စစ်မှန်သောအကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။
အပြစ်သားများသည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်တွင် နှိမ့်ချသောစိတ်သဘောရှိ ရမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒီများသည် အဘယ်သူ၏မျက်မှောက်တွင်မျှ နှိမ့်ချခြင်းကိုမပြုကြပေ။ အပြစ်သားသည် သတ္တိရှိသောအမူအရာဖြင့် “ရှေ့သို့” လာရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်ရည်၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းလည်းမရှိကြပါ။ ကျွန်ုပ်နှင့် ဇနီးသည်က ၂၀၀၄ခုနှစ်နိူဝင် ဘာလတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဘင်ဆာဒင်နာတွင်ပြုလုပ်သော Billy Graham ၏ ကရူးဆစ်ပွဲတွင် “ ရှေ့သို့” ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလာခဲ့ကြသော လူအုပ်ကြီးကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြ သည်။ Finney ၏ဩဝါဒမတိုင်မှီ နိူးထမှုများနှင့် အလွန်ပင်ကွာခြားလှပါသည်။ ၁၈၁၄ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော မက်ဒသစ်အသင်းတော်အစည်းအဝေး၏ဖော်ပြချက်ကို နားထောင်ပါ။
နောက်တစ်ညအခြားဆုတောင်းအစည်းအဝေးတွင် လူများစွာတို့သည် အ ပြစ်ကိုသိမြင်လာကြပြီးနောက် စိတ်နှလုံးပူဆွေးသောကများရောက်ပြီး ခရစ်တော်၌ ခိုလှုံရာကိုရှာတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဘုရားမဲ့အသက်ရှင်ကြသော ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ လူငယ်များသည်စိတ်ဝိညာဉ်ပူဆွေးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီး သူတို့ထံကသူတို့ထံသို့အလည်အပတ်ရောက်လာပြီး ခရစ်တော်၏သနား ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိစေသည့် ကြီးမားသည့်စိတ်ချမှုဖြင့် စတင်၍ သက်သေခံကြသည်။ (Paul G. Cook, Fire From Heaven, EP Books, ၂၀၀၉၊ စာ-၇၉ )
သင်သည် “အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း”ကို ကြုံတွေ့ဖူးပါသလား။ စိတ်ဝိညာဉ်ပူဆွေးခြင်းဖြစ် ပြီး “ခရစ်တော်၌ခိုလှုံခြင်း”ကို ရှာတွေ့ဖူးပါသလား။ Rev. Brian H, Edwards က ဤသို့ဆိုပါ သည်။
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်အစပြုပါသည်။ လူတို့သည် ထိန်းချုပ်နိူင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲ ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့ကြသည်။ အပြစ်ကိုသိမြင် သောကြောင့်ကျလာသောမျက်ရည်နှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဘဲ နိူးထမှုတစ်ခုကဲ့ သို့မရှိပါ။ နက်ရှိုင်းပြီး သက်သောက်သက်တာမရှိဘဲနှိမ့်ချစွာအပြစ်ကိုသိမြင် ခြင်းမရှိဘဲ နိူးထမှုမဖြစ်နိူင်ပါ။ [ ၁၉၀၆ခုနှစ်၊ တရုတ်နိူင်ငံတွင်ဖြစ်ပွါးသည့်နိူး ထမှု] ကိုမျက်မြင်သက်သေူတစ်ဦးက “ ကျွန်ုပ်ပတ်လည်ရှိမြေပြင်သည် သနားခြင်းကရုဏာကိုတောင်းလျှောက်ငိုကြွေးနေသော စိတ်ဝိညာဉ်များနှင့် အတူ စစ်မြေပြင်တစ်ခုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်” ဟု တင်ပြခဲ့ပါသည်။ (Brian H. Edwards, Revival! A People Saturated With God, Evangelical Press, ၁၉၉၁၊ စာ ၁၁၅-၁၁၆ )
သင်တို့တွင် အချို့တို့သည် မည်သို့ကယ်တင်ခြင်းရသည်ကို သင်ယူရန္ ကြိုးစားကြပေ မည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် သင်ယူ၍မရပါ။ တွေ့ကြုံရမည့်အရာ၊ ခံစားရမည့်အရာသာဖြစ်ပါ သည်။ သင္သိရှိသောကြောင့် သင့်အသက်တာတွင် ထိုသို့ဖြစ်လာသည်။ ယခုတွင် ထိုအ ကြောင်းကို သင်သိရှိထားသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် ကယ်တင်ခြင်းကို ခံစားနိူင် သည်။ ပထမဆုံးသင်၌ရှိရမည့် ခံစားချက်မှာ သင်သည်အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို နက်နက်နဲနဲ သိရှိထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြလိမ့်မည်။
ငါသည်ငြိုငြင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကား။ ဤအသေကောင်မှ ငါ့ကို အ ဘယ်သူကယ်လွှတ်မည်နည်း။ (ရောမ ၈း ၂၄ )
Dr. Lloyd-Jones က ဤသည်မှာ အပြစ်သား၏ ငိုကြွေးသံပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ထိုအရာကို ကျွန်ုပ်လက်ခံသည်။ နိူးထမှုတွင် ဘုရားသခင်က ဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွှတ်သည့် အချိန်တွင် ဤအရာဖြစ်ပျက်သည်ကို ကျွန်ုပ်မျက်စိနှင့်မြင်ခဲ့ရသည်။
၁၉၆ဝခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ဖြစ်ပွါးသည်တွင် Dr. Timothy Lin က တေးသီချင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ သီဆိုနေသည်။
အိုထာဝရဘုရား အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍ နှလုံးကိုသိတော်မူပါ။
ဆိုးသောလမ်းသို့ ကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကို ကြည့်ရှု၍
( ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃-၂၄ -အကျယ်ချဲ့ဖော်ပြသည်။)
မတ်တပ်ရပ်ပြီးထိုသီချင်းကိုသီဆိုကြပါစို့။ သင်တို့ကိုင်သောသီချင်းစာရွက်တွင် နံပါတ် (၈) ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ကို နက်နဲစွာသိရှိထားသည့်အချိန်တွင်သာ ခရစ်တော်၏အပြစ်ကိုဆေးကြောသည့်အသွေးတော်သည် သင့်အသက်တာတွင် အရေးကြီးပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ Dr. Chan ကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပြီးဦးဆောင်ပါ။ အာမင်………။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်သာ”၊
Fanny J. Crosby, ၁၈၂၀-၁၉၁၅ ရေးစပ်သည်။ )